nampiasana - Synonyms of nampiasana | Antonyms of nampiasana | Definition of nampiasana | Example of nampiasana | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for nampiasana
Top 30 analogous words or synonyms for nampiasana
Latabatra maro bokitra Ny Latabatra maro bokitra dia fitaovana nampiasaina voalohany teo amin'ny sehatra famokarana ny Radiô, nanomboka tany amin'ny voalohan'ny taona 1930 no nampiasana io fitaovana io.
Ariary malagasy Ny Ariary no vola fampiasa any Madagasikara. MGA no fanafohezan-teny ampiasaina hahalalana azy maneran-tany. Taorian'ny nampiasana ny Franc Malagasy (FMG) tamin'ny Repoblika voalohany, dia nampiasaina ny Ariary.
Fiteny grika Ny fiteny grika dia fiteny indo-eoropeanina. Izany no fiteny ofisialy ao Grisy sy Kipra. Ny toerana notenenana io fiteny io voalohany dia tao grika ary tao amin’ny amorontsiraky ny Azia Minora, ary tamin’ny faritra atsimon’i Italia. Nisy fotoana nampiasana ny teny grika ihany koa tao Azia Andrefana ary tao Afrika Avaratra. Ny anaran’ny fiteny grika amin’ny teny grika dia "Ελληνικά" (elliniká).
Tay Ny lava-piringa maina dia nanomboka nampiasana tamin'ity taonjato faha XXI ity. Ampiasana amin'izany ny taim-bakona aloha sy aorian'ny fampiasana ny lava-piringa. Ampy hitroka ny fofona io. Ilay fitatazana ny tay dia afaka mihetsika fa tsy miraikitra ka afaka ampiasana io amin'ny fambolena na ny fandrehetana afo.
Sinôgrama Ny soratra ampiasaina amin'ny taolam-pisikidiana dia rafitra efa navoatra tsara, izay milaza fa mety ho aloha kokoa ny taonarivo faharoa talohan'i JK ny daty nanomboka nampiasana ny soratra sinoa. Na dia porofo antitra indrindran'ny fampiasana teny sinoa aza ireo soratra fisikidiana ireo, dia efa eken'ny maro ny hoe nampiasaina tamin'ny zavatra hafa tsy ofisialy ny soratra, fa tsy naharitra noho ny taolana ireo fitaovana ireo (satria nosoratana tamin'ny bararata na hazo), ka potika hatrany.
Fiadiana ny tompondaka eran-tany ho an’ny kitra 2014 Ny Fiadiana ny tompondaka eran-tany ho an’ny kitra 2014 (amin'ny fiteny anglisy : 2014 FIFA World Cup, amin'ny fiteny frantsay : Coupe du monde de football de 2014) dia ny fiadiana ny tompondaka faha 20. Ny fikarakarana ny fiadiana moa dia ny FIFA no tomponandraikitra amin'ny zavatra rehetra. Izy io dia niatomboka tamin'ny 12 Jona 2014 hatramin'ny 13 Jolay 2014 tany Brazila no nanatanterahana ny fifaninanana ary nahitana kianja miisa 12 izany kitra 2014 izany. Natao tany Costa do Sauípe ny ankitsapaka ireo firenena handray anjara rehetra tamin'ny 6 Desambra 2013. Ity fiadiana ity no nampiasana ny teknôlôjia soritra mahitsy miloko fotsy rehefa handaka ny baolina, voalohany teo aminin'ny tantaran'ny baolina kitra izany. Tao amin'ny kianja ny Maracanã de Rio de Janeiro tamin'ny 4 ora ariva tany an-toerana no nanantanterahana ny fiadiana farany na ny ""finale"" ka ry zareo Allemagne no nahazo fandresena raha nifanandrina tamin'ny ry zareo Arjentina tamin'ny alalany isa 1-0 no nandavoan'i Allemagne ny ekipa Arjentina.
Amoron'i Mania Azo lazaina fa samy manana ny maha izy azy sy ny tantarany ny faritra madinika tsirairay: Ilaka, Iarinoro, Sandrandahy, Fandriana, Mahazoarivo (Fandriana), Imito, Tsarazaza, Andoharano, Salakaina, Anjafimaniry, Imady sy Maintinandry, Ivato, Antoetra, Isaha (Ambositra), Ivony sy Andina, Manandirana, Ambatofinandrahana, Isoavina: ireo dia samy manana ny tantarany avokoa. Ny mponina ao Imady kosa dia saika mpifindra monina avy any Finarantsoa sy Manandriana no niandohany, saika ankamaroany ary dia zary nanana ny tantarany manokana efa talohan'ny 1700 ary tafakatra hatrany amin'ny 1400-1500 mihitsy aza raha ireo fasana sy ny fivoarany no zohina, saika eran'ny faritr'Ambositra no ahitana ireo fasambazimba (fasana anairotra), sy ireo fasana efa nivoatra tato afara dia ny fasambemaso sy ny vazoho ary ireo fasana vita rary vato eto ivelany tsy mbola nampiasana simenitra; efa taty aoriana be mantsy ny fasana atao hoe tranovato na vita aloalo na tsy vita aloalo izany, dia ireo fasana mampiasa rangolahy viata amin'ny vato maromaro, ankehitriny moa dia ny fasana moderina no maro mpanao ka tena mifanalavitra amin'ireny fasan'ny Ntaolo ireny mihitsy.
Wikipedia Nampilaza tamin'ny mailaka fampitana i Sanger momba ny fisokafan'i Wikipedia tamin'ny fomba ofisialy ny 15 janoary 2001 tao amin'ny http://www.wikipedia.com, ary mbola ny teny anglisy no teny tokana nampiasainy. Hatramin'ny 10 janoary izy dia mbola fanampin'i Nupedia.com ahafahan'ny daholobe manoratra lahatsoratra izay hakambana ao anatin'i Nupedia rehefa voatsara. Tsy nankatoavin'ny mpitantana sy mpanolo-tsaina tao amin'i Nupedia anefa ny fomba fivoatrany, koa nijoro ho tetikasa mahaleotena tsy miankina amin'i Nupedia intsony izy. Nofaritana nandritra ny volana vitsivitsy voalohany ny fitsipika "neutral point-of-view" na fijery tsy mitanila, na dia mitovy betsaka tamin'ny fitsipika "nonbias" an'i Nupedia aza. Nisy koa anefa fitsipika hafa vitsivitsy napetraka. Vetivety foana dia nahazo laka tamin'ireo mpandray anjara tao amin'i Nupedia i Wikipedia, nalaza tamin'i Slashdot ihany koa ary teo amin'ireo fikarohana sehatra. Nitombo ny isan'ny lahatsoratra, nanodidina ny 20.000 ny isany ary 18 ireo tenim-pirenena nampiasana azy tamin'ny taona voalohany nisiany. 26 izany isan'ny tenim-pirenena izany ny faran'ny taona 2002, 46 tamin'ny faran'ny taona 2003 ary 161 ny faran'ny taona 2004. Niara-nisy ny Nupedia sy Wikipedia mandra-pikaton'ny Nupedia tanteraka ny taona 2003, ka nametrahana ny lahatsoratra rehetra tao anatiny ho ao amin'i Wikipedia.